MINISITERAN’NY ATITANY : Nohavaozina ny lalàna mifehy ny sora-piankohonana
Ny datin’ny 10 aogositra no nanamarihana ny andro ho an’ny sora-piankohonana. Nambaran’ny Minisitry ny atitany, Tinarivelo Razafimahefa fa mbola betsaka ireo asa vita amin’ny fanatsarana ny tontolon’ny sora-piankohonana eto Madagasikara. 12 août 2019
Singanina tao anatin’izany ny fanavaozana ny lalàna mifehy ny sora-piankohonana.
Nandray anjara tamin’ny fanamarihana ny andro ho an’ny sora-piankohonana i Madagasikara. Maro amin’ny fianakaviana Malagasy no tsy manana sora-piankohonana noho ny antony maro samihafa. Tanjona mafonja apetraky ny fitondram-panjakana amin’ny alalan’ny Minisiteran’ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana anefa no hanatsarana ny fananan’ny tsirairay izany. Maro ny ezaka efa vitan’ny fanjakana tamin’ny fanatsarana ny sora-piankohonana, araka ny fanazavana noentin’ny minisitra tompon’andraikitra Tinarivelo Razafimahefa tao anatin’ny lahateniny nanaovana ny fanamarihana ny sabotsy lasa teo.
“Efa manamafy ny fandraisany andraikitra ny fanjakana amin’ny alalan’ireo sampan-draharaha isan-tokony izay miasa ho an’ny fanatsarana ny tontolon’ny sora-piankohonana. Raha hatao bango tokana dia maro ireo dingana efa vita tao anatin’ny fanatsarana, singanina manokana ny fanavaozana ny lalàna mifehy ny sora-piankohonana”, hoy ny minisitra nanamafy. Manan-danja ary zava-dehibe ny fananana ny sora-piankohonana noho izy miantoka voalohany ny fanajana ny zo maha olona hiadiana amin’ny fanilikilihana eny anivon’ny fiaraha-monina.
Ny fananana ny sora-piankohonana ihany koa no ahafahana miady amin’ny endrika tsy rariny rehetra toy ny fampanambadiana ny zaza tsy ampy taona ary hisorohana ny herisetra mianjady amin’ny zaza tsy ampy taona. Manoloana izany indrindra, ny fitondram-panjakana hanao ezaka goavana mba hananan’ny zaza latsaky ny dimy taona sora-piankohonana ara-dalàna. Ny taona 2017, raha tsiahivina no nanatanteraka fihaonam-be ireo minisitra Afrikanina miandraikitra ny sora-piankohonana ary anisany niatrika izany i Madagasikara. Nambaran’ny minisitry atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, Tinarivelo Razafimahefa hatrany fa miainga amin’ny tsirairay ny fandraisan’andraikitra ho amin’izay fananana izay sora-piankohonana izay.
“Mbola betsaka ny asa hatrehina nefa mbola lavitr’ezaka dia mitaky ny fandraisan’ny tsirairay andraikitra mba ahitana vokatra tsara. Manainga ireo sampan-draharaha misahana ny sora-piankohonana ihany koa mba hanatontosa ny andraikitra izay sahaniny tsirairay avy. Mampirisika ihany koa ny tenako an’ireo hery velona eny anivon’ny fiaraha-monina mba hifanome tanana amin’ny asa fanentanana”, hoy hatrany ny minisitra.